One Second ( 2020 ) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကတော့ Box office worldwideမှာ $10600000အထိဝငျငှစေံခြိနျတငျရရှိထားတဲ့Nov27 2020မှာထှကျလာတဲ့ Drama History အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ1975ခုနဈ တီဗီတှမေရှိသေးခြိနျဖလငျနဲ့ ပိတျကားပေါဇာတျကားပွလရှေိ့ပါတယျ.
.ှဒီအခြိနျမှာ ဇာတျကားမပွသခငျလာတဲ့ သတငျးအတိုအထှာမှာ၂၂ရကျနေ့ ပါလာတဲ့သမီးလေးပါတဲ့ one secondစာမွငျကှငျးကိုကွညျ့ရဖို့အလုပျ ကွမျးထောငျကနထှေကျပွေးလာတဲ့ကနျြးကြုံစိမျး..ဖလငျလိပျတှကေိုမီးပုံးလုပျပေးဖို့လိုကျခိုးယူနတေဲ့လြိုကှေးနှီ…ဖလငျလိပျတှလေမျးမှာပကျြဆီးသှားလို့ အလုပျမပွုတျဖို့ အရေး ကွိုးစားရတဲ့ဖနျ့တနျြ့ရငျတို့သုံးယောကျသားဆုံကွတဲ့အခါ….
ဖလငျလိပျတဈလိပျပဲရှိခြိနျ ဖလငျဆေးရညျလဲမရှိတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျလိုတှကွေိုးစားပွီးပွနျရယူမလဲ…ကနျြးကြုံစိမျးက ၂၂ရကျနသေ့တငျးအတိုအထှာမှာပါတဲ့သူ့သမီးလေးကို မွငျတှခှေ့ငျ့ရနိုငျပါ့မလား..ဇာတျကား ကွညျ့ဖို့အရေးခကျခဲမှုမြားစှာနဲရငျဆိုငျရတဲ့ ခတျေကာလကိုဖျောပွသှားပွီးဖခငျတဈယောကျရဲ့သမီးအပေါထားတဲ့သံယောဇဉျကိုမွငျရမှာပါ
ဒီကားလေးကတော့ Box office worldwideမှာ $10600000အထိဝင်ငွေစံချိန်တင်ရရှိထားတဲ့Nov27 2020မှာထွက်လာတဲ့ Drama History အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်1975ခုနစ် တီဗီတွေမရှိသေးချိန်ဖလင်နဲ့ ပိတ်ကားပေါဇာတ်ကားပြလေ့ရှိပါတယ်.
.ွဒီအချိန်မှာ ဇာတ်ကားမပြသခင်လာတဲ့ သတင်းအတိုအထွာမှာ၂၂ရက်နေ့ ပါလာတဲ့သမီးလေးပါတဲ့ one secondစာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရဖို့အလုပ် ကြမ်းထောင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ကျန်းကျုံစိမ်း..ဖလင်လိပ်တွေကိုမီးပုံးလုပ်ပေးဖို့လိုက်ခိုးယူနေတဲ့လျိုကွေးနွီ…ဖလင်လိပ်တွေလမ်းမှာပျက်ဆီးသွားလို့ အလုပ်မပြုတ်ဖို့ အရေး ကြိုးစားရတဲ့ဖန့်တျန့်ရင်တို့သုံးယောက်သားဆုံကြတဲ့အခါ….
ဖလင်လိပ်တစ်လိပ်ပဲရှိချိန် ဖလင်ဆေးရည်လဲမရှိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားပြီးပြန်ရယူမလဲ…ကျန်းကျုံစိမ်းက ၂၂ရက်နေ့သတင်းအတိုအထွာမှာပါတဲ့သူ့သမီးလေးကို မြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်ပါ့မလား..ဇာတ်ကား ကြည့်ဖို့အရေးခက်ခဲမှုများစွာနဲရင်ဆိုင်ရတဲ့ ခေတ်ကာလကိုဖော်ပြသွားပြီးဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့သမီးအပေါထားတဲ့သံယောဇဉ်ကိုမြင်ရမှာပါ